HESHIIS DHAN: Rabitaankii Arsenal Ee Philippe Coutinho Oo Dhinac U Dhacay & Jamaahiirta Gunners Oo Farxad La Damaashaadaya - Gool24.Net
HESHIIS DHAN: Rabitaankii Arsenal Ee Philippe Coutinho Oo Dhinac U Dhacay & Jamaahiirta Gunners Oo Farxad La Damaashaadaya
August 8, 2020 Apdihakem Omer Adam
Arsenal ayaa u muuqata mid gacanta ku dhigaysa saxeexeedii labaad maalmo gudahood kaddib markii hore loo sheegay inay heshiis la meel dhigeen garabka kooxda Chelsea ee Willian Borges oo qaab bilaash ah ugu wareegaya.
Sida uu hadda sheegayo wargeyska Sport ee magaalada Barcelona kasoo baxa, Coutinho ayaa qarka u saaran inuu ciyaaryahan Arsenal ah noqdo isaga oo heshiiska shaqsiga ah la gaadhay Gunners.
Xiddigan asal ahaan Barcelona ka tirsan isla markaana 145 Milyan Pound kaga tagay Liverpool bishii January ee 2018 ayaa lagu sawiray isaga oo jooga xerada tababarka ee Arsenal dhawaan.
Arsenal ayaa marka laga yimaado heshiisyada Coutinho iyo Willian oo ay ku dhawaad dhammeeyeen sidoo kale bar-tilmaameedyo kale leh, madaxda kooxdaas ayaa tababare Mikel Arteta ku garab istaagi doona suuqa xagaagan.
Sidoo kale wargeyska Sport ayaan kaliya sheegin in Arsenal ay la heshiisay Coutinho balse intaas ku daray in xataa ay is fahmeen madaxda sarre ee Barcelona iyagoo heshiis hal sano oo amaah ah kula soo wareegaya ciyaaryahanka.
Coutinho oo ay sidoo kale hore u doonaysay kooxda Chelsea ayaan laga doonayn kooxdiisa asalka ah ee Barcelona oo isku day-day inay mar u dirto dhinaca kooxda Bayern Munich ee uu xilli ciyaareedkan amaahda ku joogay.
Wakiilka Coutinho ee Kia Joorabchian oo isagu hore u sheegay inuu taageere Arsenal ah yahay ayaa la fahamsan yahay inuu dhammeeyay oo fududeeyay waxkasta oo heshiiskan ku saabsan.
28 sano jirkan ree Brazil ayaan la filayn inuu wax heshiis ah u saxeexo kooxda ree London ilaa uu xilli ciyaareedka kala soo dhammaysto Bayern Munich oo wali Champions League baaqi ku ah.
Ugu dambayn, sida warbixinta lagu sheegay Coutinho ayaa booqday xarunta tababarka Arsenal ee Colney waxaana uu xiisaynayaa inuu Mikel Arteta la midoobo xilli ciyaareedka dambe.